Hargaysa: Mdaxweyne Ku-Xigeenka Somaliland Oo Dadweynaha La Tukaday Salaadii Ciidda | Gabiley News Online
Hargaysa: Mdaxweyne Ku-Xigeenka Somaliland Oo Dadweynaha La Tukaday Salaadii Ciidda
Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ahna ku simaha madaxweynaha ayaa ugu baaqay bulshadda reer Somaliland in ay ilaashadaan wada jirka iyo midnimadoodda.
Waxaanu ku booriyay madaxweyne ku-xigeenku in ay ka fogaadaan qabyaaladda iyo wax kastoo kala faquuqaya dadka, isla markaana ay ku dedaalaan sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen horumarkoodda.
C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), waxa uu sidan ka sheegay khudbad u jeediyay kadib tukashadii salaadda Ciidul Adxa ee maanta oo uu boqolaal dadweyne ah kula tukaday masjid jaamaca magaaladda Hargaysa.
Madaxweyne ku-xigeenka waxaa tukashadii salaadda ku wehelinayay xubno ka mida golaha wasiirrada Somaliland, masuuliyiinta xisbiga Kulmiye, maayarka caasimadda Hargaysa, siyaasiyiin, agaasimeyaal guud, masuuliyiin hore iyo kumanaan dadweynaha caasimadda Hargaysa ah.
Ku simaha madaxweynaha oo halkaasi khudbad uga jeediyay dadweynihii uu la tukaday ayaa ALLE uga baryay in uu ciidan ciideedda caafimaad qab iyo nabadgeliyo ku gaadhsiiyo sanadka sanadkiisa.
Dhinaca kale kadib markii la soo tukaday labaddii rakcadood ee salaadda Ciidul Adxa ayaa madaxweyne ku-xgeenka Somaliland waxa uu xarunta madaxtooyadda ee magaaladda Hargaysa ku qaabilay boqolaal dadweyne ah oo isugu jiray waayeel, masuuliyiin, siyaasiyiin, caruur iyo dhalinyaro.
Kuwaasoo booqasho iyo salaam ugu tegay madaxweyne ku-xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Somaliland.